अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक
विश्व बैंकले निजी क्षेत्रसँगको सघन सहकार्य तथा सम्भव भएसम्मका स्रोतको दोहनबाटमात्रै नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय हासिल गर्ने मुलुक बन्ने योजनामा सफल हुने जनाएको छ । सरकारले सन् २०२१ सम्ममा १० प्रतिशत बिन्दुले लगानी बढाउने लक्ष्य राखेकोले यसका लागि हालको रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट संरचनागत परिवर्तन गरी लगानी तथा उत्पादकत्वमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न अत्यावश्यक रहेको विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल अपडेट’ प्रतिवदेनको निष्कर्ष छ ।
साझा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने साना किसानहरूको अभिलेख नहुँदा उनीहरूको ऋण मिनाहा गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भएको छ ।
सहकारीमार्फत ८८ लाख लिटर दूध खरिद–बिक्री
मकवानपुरमा गत आर्थिक वर्षमा करिब ८८ लाख लिटर दूध सहकारीमार्फत खरिद–बिक्री भएको छ । किसानबाट दूध संकलन र बिक्रीको काम गर्दै आएको मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले गत आर्थिक वर्षमा ८८ लाख २० हजार ८ सय ७७ लिटर दूध खरिद तथा बिक्री गरेको जनाएको छ ।
चीन जाने सडक स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारले साढे पाँच अर्ब अनुदान दिएको छ । स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक खण्ड २ लेनको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्न चीन सरकारले ३२ करोड ९० लाख युयान अर्थात् ५ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ अनुदान सहायता प्रदान गरेको हो ।
तीन महिनामा १ अर्ब ६० करोड राजस्व संकलन
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा १ अर्ब ६० करोड ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यालयलाई ३ महिनामा १ अर्ब ४८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा १ अर्ब ६० करोड ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालय प्रमुख दिलीप गौतमले जानकारी दिए ।
पर्याप्त बजेट छुट्याएर मात्र ठेक्का प्रक्रियामा लगिने
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याएपछि मात्र सरकार ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पर्याप्त बजेट नछुट्याएर ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा धेरै समस्या देखापरेको बताए ।
लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै खोला र खोल्सीबाट बगेका पानीबाट पनि मनग्य आम्दानी हुन थालेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले नयाँ कार्यविधि अनुसार ३३ वटै वडा कार्यालयबाट पनि कर सङ्कलन शुरु गरेको छ । एकीकृत सम्पत्तिको नाममा उच्च अदालत पोखराले कर नउठाउन आदेश जारी गरेपछि महानगरले सम्पत्ति कर तथा भूमि व्यवस्थापन कर शीर्षकमा महानगर र वडा कार्यालयबाट कर सङ्कलन शुरु गरेको हो ।
अलैंचीको मूल्यमा गिरावटपछि किसान चिन्तित
मुलुकभर बडादसैंको चहलपहल भइरहँदा लमजुङका किसानलाई अलैंची टिप्ने चटारो भयो । तर पछिल्ला वर्षमा अलैंची मूल्य घट्दै गएपछि भने अलैंची किसानको उत्साह मर्दै गएको छ । चारवर्ष अघि लमजुङमा अलैंचीको मूल्य प्रतिकेजी २५ सय थियो । सोही अलैंची अहिले प्रतिकेजी ७ सयको हाराहारीमा झरेको छ । प्रत्येक वर्ष अलैंची उत्पादन बढ्दो तर मूल्यमा भने घट्दो भएपछि वर्षौंदेखि व्यावसायिक अलैंची खेती गर्दै आएका किसान चिन्तित बनेका छन् ।
मूल्यवृद्धि ०.३ प्रतिशतले घट्यो
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ०.३ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आवको भदौमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ३.९ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । पहिलो महिना साउनमा उपभोक्त मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत थियो ।
धान किन्न खाद्य संस्थानले माग्यो २ अर्ब
नेपाल खाद्य संस्थानले धान खरिद गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । आफूसँग पर्याप्त रकम नभएको भन्दै खाद्य संस्थानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार धान खरिदका लागि थप २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको हो । सरकारले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा तोकेको छ । सोही मूल्यका आधारमा किसानसँग धान खरिद गर्दा अर्बौ रुपैयाँ लाग्ने भएकोले संस्थानले अर्थसँग थप रकम माग गरेको हो ।
झण्डै १२ करोडको सयपत्रीका माला र फुल आयात गरिने
खाद्यान्नका साथै फूल उत्पादन पनि कृषि पेशा हो भन्ने कुरा किसानलाई बुझाउन नसक्दा फूलको आयात घटाउन सकिएको छैन । यस वर्षको तिहारमा करीब तीन लाख विभिन्न जातका माला भारतबाट आयात हुने अनुमान गरिएको छ ।
जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयले गत तीन महिनामा पूँजीगत खर्च १२ दशमलब ४४ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । जिल्लामा निकासा भएको कूल पूँजीगत खर्च रु एक अर्ब ९० करोड ६४ लाख १५ हजारमध्ये चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रु २३ करोड ७१ लाख ६४ हजार १४९ मात्र खर्च भएको हो ।
जडीबुटीको तेल लिटरको ५५ हजार
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ बेल्डाँडीका बासिन्दा जडीबुटी खेतीमा आकर्षित भएका छन् । उनीहरूले मेन्था, लेमनग्रास, क्यामामाइल, असारे, लिपटिस, कडिपत्तालगायतका जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । प्रशोधन गरेको मेन्थाको तेल प्रतिलिटर ४० हजार, क्यामामाईलको तेल प्रतिलिटर ५५ हजार, कडिपत्ताको प्रतिलिटर ३ हजार रूपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ बेल्डाडीकी बाटुदेवी साउद जडीबुटि प्रशोधन केन्द्रमा अपरेटरको काम गर्छिन ।
एकै किसिमको कृषि नीति बनाउने पहल
स्थानीय तहहरूले कृषि क्षेत्रमा फरक–फरक नीति बनाउँदा किसानलाई समस्यामा पारेको ठहर गर्दै अब एकै किसिमको नीति निर्माणको पहल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको अगुवाइमा पाँचथरका सबै स्थानीय तहका लागि एकरूपता ल्याउने गरी कृषि नीति बनाउने पहल थालिएको हो ।